Xulashada Xubnaha dalka kenya uga mid noqonaya Baarlamaanka bariga Afrika oo wali buuq ka jiro. | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Xulashada Xubnaha dalka kenya uga mid noqonaya Baarlamaanka bariga Afrika oo wali buuq ka jiro.
Published on May 27, 2012 by Sacdiya Garabey · No Comments
Share27.May.2012:- Saraakiisha Xisbiga URP ayaa waxa ay wacad ku mareen in aysan ka hari doonin Xubnaha Xisbiga ODM ay usoo Xusheen Baarlamaanka Bariga afrika.
Hogaamiyaha Xisbiga URP William Rutto ayaa sheegay in ay ku dadaali doonaan in aysan Golaha barlamaanka ansixin 5-Xubnood ay ay ODM usoo xusheen in ay ku biiraan Baarlamaanka Bariga Afrika.
WilliaM RUtto ayaa ku celceliyya in Xisbigooda URP ay xaq u leeyihiin in ay qayb ka helaan Xubnaha la siiyay ODM ee baarlamaanka bariga Africa.
Dalkani Kenya ayaa Baarlamaanka Bariga Africa ku leh 9 xubnood waxaana kala qaybsaday Xisbiyada ODM IYO PNU.
Xisbiga ODM ayaa la siiyay iala iyo 5 xubnood halka xisbiga PNU ay qaadeen 4 xubnood waxaana jira dood balaaran oo arintaasi ka dhalatay.
Xubnihii horay uga midka ahaa xisbiga ODM ee isaga baxay ayaa doonaya inay qayb ka helaan 5 xubnood e ODM la siiyay ee ka mid noqonaysa baarlamanka bariga Africa iyagoo ku andacoonaya in iyaga ay horay usoo dhiseen Xisbigaas.